Chii chinonzi Globe Valve Uye Inoitiswa Sei?
ne admin pane 21-05-14
Globe mavharuvhu anomhanyiswa nechanza chemaoko uye zvakare anodzora kutenderera kwemvura. Nekudaro, ivo zvakare vanogadzira yakakura kumanikidza kurasikirwa. Kusarudza vharafu chaiyo kunodiwa, sezvo mhando dzakasiyana dzine mabasa akasiyana pamwe nekushandisa. Zvishoma ...
Chii chinonzi Check Valve?
Tarisa mavharuvhu anowanzoiswa paipi yekudzivirira kudzoka. Vheji rekutarisa rinongova nzira imwe vharuvhu, kuyerera kunogona kuyerera zvakasununguka munzira imwechete, asi kana kuyerera kukatenderera, vharafu ichavharwa kuchengetedza pombi, ...
Kuchengetedza Uye Kugadzirisa Matipi EButterfly Valve
Iyo vharuvhu vharuvhu mhando yekuyerera inodzora chishandiso, iyo inosanganisira inotenderera dhisiki yekushandisa iyo mvura inoyerera mukuita. Panzvimbo yakatwasuka yevhavhavuruvuru, pane simbi-yakavakirwa disc inovhara ...